DH-OFEM CI flexo napetraka tany Korea - DH Flexo Printing
DH-OFEM CI flexo napetraka napetraka ao Korea
Vao haingana, DH-OFEM CI Flexo press, natomboka tamin'ny Donghang Graphic Technology (DH) sy italofe flexofem, nahavita ny fametrahana sy ny fananganana asa amin'ny orinasa mpanjifa Koreana.
DH dia nirotsaka tamin'ny famolavolana, famokarana ary fivarotana masinina fanontam-pirinty famoahana ho an'ny sokajy mihoatra ny 20 taona. Mba hahafahana manitatra ny tsena sy ny fampivoarana ny fifaninanana vokatra, DH sy ny orinasa Flexofem Italiana dia manatontosa ny fiaraha-miasa ara-teknika, fiaraha-miasa matanjaka, ary manangana sehatry ny fiasan'ny CI flexo. Niara-nidinika tamin'ny indostria io fiaraha-miasa io.
Ny orinasam-pandraharahana dia nampiasa andiam-peo CI flexo avy amin'ireo orinasa Eoropeana malaza, ary ny fepetra fitsirihana ny fitaovana dia mifanaraka tanteraka amin'ny fenitry ny ekipa eoropeana. Noho izany, nanasa manokana ireo injeniera italiana mba hitari-dalana ny DH. Ny DH dia namolavola tetikasa azo ekena ho an'ny mpanjifa. Ankoatra ny fanontam-pirinty tsy tapaka, ny fandefasana fiatoana sy ny fihenan-tsakafo, dia nanao simulation samihafa ihany koa ny fahasamihafan'ny fepetra fiasana, izay manamarina fa afaka mameno haingana ny fanoloana fanontam-pirinty ny fitaovana ary hamerina amin'ny laoniny ny famokarana farany. Ny fitsapana manontolo dia vita tanteraka taorian'ny andro 3 ary tena nahafa-po ny mpanjifa. Ny injeniera italiana koa dia manana fomba fijery tsara momba ny fivoriambe sy ny fananganana fitaovana, ary mino fa feno ny hatsaran'ny orinasa italiana tany am-boalohany izy ireo.
Ny DH-OFEM ci flexo press dia manentana ny fampiofanana servo avoitra, ny teknolojia matanjaka, ny fanamafisana ny faneriterena maika sy ny teknolojia avo lenta hafa ao amin'ny orinasa, izay mampihena be ny fotoana fanoloana ny vokatra ary manome antoka ny fanontam-pirinty. Ny rafitra fiarovana tokana miavaka (teknolojia patanty), izay manome antoka bebe kokoa ny fanamafisana orina ny toetr'andro sy ny fiatrehana ny tsindry mafy rehefa mivoaka haingana ny milina. Ny DH-OFEM dia afaka manampy adiresy mifanaraka bebe kokoa amin'ny zavatra takian'ny vokatra, toy ny corona, fanesorana vovoka, fingotra, tsindrimandry, sns., Mba hamenoana ny dingana ilaina ary hampihenana ny vidin'ny vokatra amin'ny mpanjifa.
← Masinina fanontana CI flexo VS milina fanontana gravure
Takelaka voasokitra vita amin'ny fingotra amin'ny fitaovana fanonta flexographic →
DH-JL 2200mm lehibe flexo fanontam-pirinty vita amin'ny famoahana
DH-FP presser à presse à Uganda
Ny milina fanontam-pirinty DH-Jiaolong dia naseho tao amin'ny Shanghai 2019 SINO Corrugated Exhibition.
DH-ROC vaovao haingam-pandeha avo flexo printable natolotra ho an'ny mpanjifa
Famafàna dika printy vaovao napetraka napetraka tao Turkey
Ahoana no hialana amin'ny olana amin'ny blasfemia ho an'ny famoahana ny flexo?
Ny maha-zava-dehibe ny roller anilox amin'ny famoahana flexo
Fampidirana ny dingana famolavolana ny flexo CTP
DH miloko fanontam-pirinty flexo ho an'ny fanontam-pirinty
Fitaovana fametrahana New DH-OFEM CI napetraka
Copyright © 2021 DH Flexo Fanontana - Lyrical WordPress lohahevitra nataon'i GoDaddy